Ao Però, 23 ora isan’andro ny ho an’ny teny espaniola ary ora iray ho an’ny fiteny tompotany · Global Voices teny Malagasy
Ilaina hamafisina ny fampitambaovao tompotany hampitovy tantana ny fisoloantena
Voadika ny 22 Septambra 2020 5:41 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Français, Nederlands, Português, English, Español
Pikantsarin'ny programan'ny TVPerú, nalain'i Carlos Molina Vital, ary nahazoana alalana ny fampiasana azy.
Ny lohatenin'ity lahatsoratra ity no mamehy izay mitranga ao amin'ny fantsona fahitalavi-panjakana TVPerú sy mitaratra ihany koa ny tantaran'ny repoblika. Manatona ny faharoanjato taona ny nananganana ny fanjakana-firenen'i Però amin'ny endriny hita moa isika amin'izao fotoana izao, fotoana fohy dia fohy no omena ny vahoaka tompotany ao amin'ny fahitalavi-panjakana. Mahatonga antsika hampieritreritra lalina sy filàna hetsika ho amin'ny fankatoavana ny fiandrianan'ny vahoaka tompotany amin'ny fampiasana ny fiteniny izao toe-javatra tsy mba nanaovana fifanakalozan-kevitra mihitsy tamin'ireo vondrona mpandala ny fiteny quechua esy aymara izao.
Taona vitsivitsy izao no naely manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 6 ora maraina ny fandaharana amin'ny fiteny quechua sy aymara. Amin'ny fotoana mahavitsy indrindra ny mpijery ao anatin'ny 24 ora amin'ny andro iray no omena anay. Efa nosoloina mihitsy aza io ampaham-potoana io taorian'ny fihetsiketsehan'ny mpikatroka tompotany ho fanoherana ny fanapahan-kevitry ny fitaleavan'ny fantsona hampiely ireo fandaharana ireo amin'ny 4 ora maraina tamin'ny fanombohan'ny volana aogositra. Araka ny iray amin'ny fandresen-dahatra naroson'i Eduardo Guzmán Iturbe, tompon'andraikitra tamin'io fanovana io, dia hoe amin'ny 4 ora maraina no mifoha ny mpiteny quechua sy aymara, fa tsy toy ny olona miaina an-tanandehibe. Saingy mifanohitra amin'ny lahatahirin'ny taona 2017 izay mametraka fa miaina an-tanandehibe ny ampahan'olona maro mpiteny tompotany. Ao Lima fotsiny, mihoatra ny 700 000 amin'ny mponina no manana ny quechua ho fitenin-drazany. Ankoatra izany, miainga avy amin'ny fanambaràna efa re matetika tao anatin'ny 200 taona nijoroan'ny Repoblikan'i Però mivantana izany fomba fandresen-dahatra izany izay mametraka fa « efa taloha izany tompotany izay ary miaina ambanivohitra ».
Saingy ao Però, miaina an-tanandehibe [pdf] (vokatry ny fifindra-monina anatiny) ny ankamaroan'ny mpiteny quechua fa tsy misitraka servisim-panjakana amin'ny fitenin-drazany. Tsy maintsy manaraka ny politikam-panjanahantanin'ny firenena izay mandrisika ny fiteleman'ny fiteny espaniola eo anivon'ny andrim-panjakana isankarazany toy ny fanabeazana, ny fahasalamana ary ireo andrimpanjakana hafa ireo mpiteny tompotany ireo. Ny tena zavadoza dia ny mahazo ny any amin'ny faritra toa an'i Cusco sy Apurimac, izay miteny quechua ny ankamaroan'ny mponina [pdf], saingy amin'ny fiteny espaniola ny servisim-panjakana, ankoatra ireo tranga tena maningana vitsy da vitsy. Tahaka izany no nahaterahan'ny Repoblikan'i Però. Voatazona izany, ary saka tsy niova mihitsy tao anatin'ny 200 taona. Fa raha manao ny « multiculturalisme » sy ny « interculturalisme » [pdf] izy dia ho fanafenana fotsiny ihany ny toetra lalina ao anatiny izay mpanjanatany, mpanavakavaka sy mpanilikilika misy ato amin'ity firenena ity. Tsy hatrao andrenivohitra ihany no vokatra indray izay fisaina mpanjanatany izany, fa averimberin'ny sangany isa-toerana izay mifehy ny fahefana izay mihevitra fa arakarana ny itenenana teny espaniola no androsoana sy ivelarana ho maoderina kokoa, ary izay no mitaratra izay antsoin'i Rivera Cusicanqui (2010) hoe fisaina mpanjanatany [pdf].
Mbola tsy manana programa amin'ny fiteny quechua ny vondrona fampitam-baovao ara-barotra, porofo milaza fa mizotra mankany amin'ny feritreretana fa ny teny espaniola irery ihany no fiteny ifampiresahana ao Però amin'izao atomotra ny faharoanjato taona izao. Mampiseho zavatra izao fihetsiky ny tompon'ny fampitam-baovao lehibe manoloana ny vahoaka tompotany izao; ampiasaina ho «harena ara-kolontsaina» ihany ireo sy entina hanintonana ara-pizahantany mandritra ny fotoana maromaro. Amin'ny andro hananan'ireo vondrona ireo fandaharana amin'ny fiteny quechua no ho fotoan-dehibe manamarika ny fankatoavana ny « hafa » ao amin'ity firenena ho roanjato taona ity. Ireo « hafa » izay vahoaka tompotany niaina tato anatin'ity zaratany ity talohan'ny fananganana ny Repoblikan'i Però sy ny fahatongavan'ny Eoropeana.
Mbola manohy hatrany amin'ny famerimberenana ny fisaina sy ny politika mpanjanatanin'ity Repoblikan'i Però teraka tamin'ny taona 1821 ity isika, izay nandrisihana ny fitelemana sy ny fanilikilihana ny tompotany. Raha ny amin'ny fiteny quechua indray, ampahatsiahivina fa nijotso avy amin'ny manodidina ny 70% tamin'ny taona 1870 ka tonga any amin'ny 30% sisa tamin'ny taona 1970 ny mpiteny azy. Natao avokoa ny fomba rehetra hampiroboroboana sy hampiasana ny fiteny espaniola any amin'ny fampianarana sy any amin'ny sampandraharaham-panjakana hafa. Amin'izao fotoana izao, araka ny lahatahirin'ny governemanta [pdf],13 % amin'ny Peroviana no miteny quechua.
Tahaka ny hanomezan'ny fahitalavi-panjakana ny maraimbe ho amin'ny fiteny tompotany, dia terena ihany koa ny vahoaka tompotany eto amin'ity firenena ity mba tsy ho hita araka izay azo atao ka tsy raharahiana na heverina ho olana mila vahana. Tsy lazaina ny momba anay raha tsy efa misy voina, na misy ny fifandiraha ara-piarahamonina, na rehefa ilaina izahay mba hiditra ao amin'ny tafika an'ity firenena ity, na rehefa ilaina ny hampiroboroboana ny fizahantany. Ireny ora sy fotoana manify dia manify ankatoavana ny tompotany ireny no vokatry ny famindram-po sy ny adidy hiarovana ireo heverina ho ambany noho ny hafa. Mifangaro ny fanadinoana sy ny famindram-po ary tsy maneho ny mahaolombelona ilay na ireo « hafa », na « runas » (voambolana quechua midika hoe « olona ») na ireo vondrona tompotany hafa ao amin'ny firenena. Mandritra ny 23 ora ambiny ao amin'ny fandaharam-pahitalavitra mandritra ny andro iray dia mbola mitoetra ho tsy nisy ary tsy misy tao amin'ny tantara indray ny tompotany.
Ary izany no mahavaindohan-draharaha ny fahazoan'ny vahoaka tompotanin'i Però fiandrianana amin'ny fampiasany ny fiteniny sy fahitana bebe kokoa azy amin'ny fampitam-baovao. Fa inona tokoa moa no dikan'izany ? Midka izany hoe manana tambajotram-baovao, fantsona fahitalavitra sy fampielezampeo iray ary sehatra virtoaly maro hamokaram-baovao miainga avy amin'ny haizatranay amin'ny maha-bahoaka tompotany anay, ka izahay no mpitantana. Raha mijery ny haizatran'ny vahoaka tompotany hafa izahay, tahaka ny any Aostralia sy Nouvelle-Zélande, tsikaritray fa nahapetraka tambajotra sy sehatra fampitam-baovao azy ireo manokana ry zareo. Saingy ahoana ny ahatongavana amin'izany ? Maro ireo Quechua, Aymara, Amazonianina efa manana tobim-pampielezampeo ao an-toerana hatry ny ela, manana fahitalavitra sy gazety an-tsoratra. Ilaina ny manamafy ny tambajotra, miditra amin'ny sehatra vaovao ary mitarika rakipaikam-pifandraisana miainga amin'ny media.
01 Jona 2021Fahasalamàna
02 Avrily 2021Fitantanam-pitondrana